"Yiyiphi" -Impazamo - Inkcazo kunye nemizekelo
Umhlathi wesigama (okanye isiqendu sesizalwana esingahlawulelwayo ) esiqala ngegama ntoni .
Kwimeko yesigwebo esichazayo , yintoni- umhlathi ungasebenza njengesihloko (ngokuqhelekileyo kulandelwa ifom yesenzi), umxholo wesifundo okanye into . (Jonga imizekelo kunye nokuqwalaselwa, ngezantsi.)
Isivakalisi esichazayo kunye neSigwebo sokuHlola
Namahhala (igama lomntu) Umhlathi ohambelana nawo
I-Wh -Iqhinga kunye ne- Wh -Intetho
" Into endifuna ukuba wenze ngayo kukuba uhambe kwi-Consulate yaseTurkey eGenoa, cela i-Consul uze umnike umyalezo kum. Ngaba uya kwenza oko?" (U-Eric Ambler, Uhambo Oluya Kuloyiko . I-Hodder ne-Stoughton, ngo-1940)
"Imali yinto endiyifunayo . Iminye imali yabantu." (UHarry Harrison, i- A stainless Steel Trio .
" Into endiyifunayo yayingenakwenzeka . Kwakunqwenela ukuba yonke loo nto ibe yicinga." (UPawulos Theroux, iMbali Yamfihlakeleyo, iBookantine Books, 1989)
" Into endiyifunayo yayiyizihlandlo ezintsha. Ndandifuna ukuphuma ehlabathini kwaye ndivavanye ngokwam, ukusukela kule nto ukuya kuthi, ukuhlola ngokubanzi kunokuba ndikwazi." (UPaul Auster, "Isandla Emlonyeni: Isiganeko Sokuhluleka Kwangaphambili." Iprojekthi eqokelelweyo i- Faber & Faber, 2003)
" Yintoni engamele iyiliwe kukuba iinjongo zezopolitiko nezomkhosi kufuneka ziqinisane njengenxalenye yomgaqo-nkqubo ohambelanayo." (I-Carlos Pascual, "i-Iraq ngo-2009: Indlela yokunika uxolo ngethuba.)" Ilungelo " 08: Iingcamango ezizimeleyo kuMongameli olandelayo uMelika , u-Michael E. O'Hanlon.
"Nceda uvumele uManners Manners ukuba acetyise ukuba ngaphambi kokuba umntu azame ukuphucula kwisithethe, mhlawumbi umntu kufuneka afune ukuba yintoni leyo nkcubeko ." (UJudith Martin kunye noJacobina Martin, u- Miss Manners 'Umkhombandlela womtshato ohloniphekileyo .WW Norton, 2010)
" Ingxaki endiyithandayo ngokuba yi-Asia yaseMerika ayikho into ehambelana nokudibanisa nohlobo oluthile lomntu othi, ngandlela-thile, unjengaye. Yintoni endikhathazayo ukuba ndidibanisa nolunye uhlobo lomntu ofana naye ochazwe kum isiseko sokuguqulwa kwebala, umbala weenwele, ukuma kwamehlo, nokunye. " (U-Eric Liu, oMngxowankulu waseAsia: Amanqaku omlomo wesintu . I-Random House, 1998)
Ukugxininisa Ngaliphi Igatya
"Sinokusebenzisa isigatshana esilandelayo ukuba sigxininise ulwazi oluthile kwisigwebo (= enye indlela yesigwebo esicacileyo ). Le pateni ibonakala ngokuqhelekileyo kwingxoxo . liphi na umhlathi. Thelekisa:
- Sibanike ikhekhe elenziwe ekhaya, kwaye
- Into esiwanike ngayo yayiyinqumba elenziwe ngekhaya.
Sisoloko sikwenza oku ukuba sifuna ukuzisa isihloko esitsha; ukunika isizathu, umyalelo, okanye inkcazo; okanye ukulungisa into ekhankanywe okanye eyenziwe. Kule mizekelo elandelayo, ulwazi olujoliswe kuyo lululwimi olungundoqo:
- Into endifuna ukuba usebenze kuyo yindlela yokuhlaziywa kwiwebhusayithi .
- U-Isa wafika emva kweeyure ezimbini: kwenzeka ntoni ukuba ikhefu yakhe yebhayisikile yaphuka .
- 'Sifumane le ncwadi encinci - iya kwenza ntoni?' 'Hayi, into endiyifunayo yayinto enkulu kakhulu kwaye inamandla .'
Siyakwazi ukubeka isigatya-qhinga ekuqaleni okanye ekupheleni kwesivakalisi:
- Yintoni eyandikhathaza kakhulu kukuba yayingenangqondo, okanye
- Ukunyaniseka kwakhe kwakungandikhathaza kakhulu. "
(UMartin Hewings, i- Grammar ephezulu ekuSebenziseni: I-Reference and Book Practical for Learners Advanced of English , 3rd Cambridge University Press, 2013)
Ukugxininiswa kweZigwebo kunye neziHlomelo
"Sinokusebenzisa isigatya esivela kulokho ukunikela ngakumbi .
Ngokomzekelo, uRosie uthi:
Yintoni eyenza ndithukuthele ngokwenene ibango lokuba ukukhwabanisa ngumdlalo wendabuko.
Enye indlela yokuthetha oku:
Ibango lokuba ukukhwabanisa ngumdlalo wendabuko undenza ndibe nomsindo.
Ukuhlengahlengisa isivakalisi usebenzisa oko kwenza uRosie evelele ngakumbi. "
(Marian Barry, Impumelelo yamaZwe ngeziNgesi ze-IGCSE , i-Cambridge University Press, 2010)
"Ngokutshintsha izibhengezo eziqhelekileyo kolunye uhlobo, unokuchaphazela isigqi kwaye ugxininise ....
"[Uhlobo oluthile lwenguquko] oluguqula isigwebo sesivakalisi [sisiqalo sesigwebo] siqala isigwebo ngeliphi isigatya :
Yintoni [u-Alfred Russel] uWallace engazange ayibone ukuba indlela yokuqhuba yonke i-geology, ngexesha elifanelekileyo, iya kubonwa njengeyona ndlela ingacatshangelwayo ye-tectonic plate. (Simon Winchester, Krakatoa , 67)
... UWinchester ugxininisa ukuba awukwazi ukuqonda nokubeka i-tectonics ... "(uDonna Gorrell, iStyle and Difference .) UHoffon Mifflin, 2005)
Isivumelwano-Verb Isivumelwano kunye nawaphi Amagatya
" Isivumelwano sesivumelwano sibonakala silawula inombolo yesenzi esilandelayo yintoni isigatshana . Qwalasela le mizekelo yeMigangatho : Liliphi igama lakhe nawaphi amagama abo? Apha amagama kunye namagama alawula ukuba ingaba yintoni enye okanye iyininzi . into echanekileyo , yiyiphi isigatya esivumelanayo kunye nokuba sisinye okanye isenzi esiningi: Oko ndikufunayo ngamagama kunye needesi kunye noko ndikufunayo ngamagama kunye needesi zombini zi-Standard, nangona ukukhangwa ngamakhontrakthi kwintetho ephakamileyo yokutyunjwa kwamagama kuya kubakho ukwenza ubuninzi bobukhethiweyo. Phantse nawuphi na omnye umqathango wesigatya sithatha isenzi esisodwa, njengokuba sifuna ukukwazi namhlanje ukuba kusele ixesha elingakanani [ zingaphi iiyure ]. " (UKenneth G. Wilson, i -Columbia Guide ku-Standard American English . Columbia University Press, 1993)
"Cinga izivakalisi ezifana nezi zilandelayo
(8) Yintoni eyikhathazayo kumgangatho ophantsi komsebenzi wakho.
(cinga umgangatho omncinane womsebenzi wakho undikhathazayo. )
(9) Oko wakwenza kwakukho (ukuba) undixelele esidlangalaleni.
(ucinga ukuba undixelele emphakathini .)
Ezi zivakalisi zibizwa ngokuba zizivakalisi ezicacileyo . Isivakalisi sokungabonakaliyo sibandakanya isifundo esizalwe nesihlobo esizimeleyo yintoni- umhlathi olandelwa ngu-BE kunye nesifundo esizalisayo . Isivakalisi esicacileyo sisichaza isigqityiweyo esisigxina esisodwa - esimele senziwe ngokukhawuleza yintoni na - esishiyelwe ukuba ichazwe (egxininiswe) ngongqinisiso. Kukho iintlobo ezimbini eziphambili zesigwebo sokungabonakaliyo: ezo zibonisa ukuba ngubani ochaphazelekayo kwimeko echazwe yintoni- umhlathi (njengase-(8)) kunye nalawo ekubhekiselelwe kuwo ngexesha elithile (njengokuba ku ( 9)). Ngaloo ndlela, umzekelo, kwi (8) isigwebo sokubamba iqhosha elisetyenzisiweyo sisetyenziselwa ukuchonga i-DOER yeemeko, njengoko kuboniswe kwisifundo sokuqala ( umgangatho ompofu womsebenzi wakho ), ngoxa (9) isetyenziselwa ukuchonga uhlobo lwemiqathango ekhutshwe yi-DOER, njengoko kuboniswe ngethuba lokuqala ('undixelele esidlangalaleni'). "(I-Carl Bache, i- Essentials of Mastering IsiNgesi: I-Grammar ye-Concise .) UWalter de Gruyter, 2000)
I-Golf Course Marshal kunye neYakhe (okanye yayo) Imisebenzi
Uphando Lithini NgokuFunda Kwe-Intanethi?
Ziqhelise ekudaleni izivakalisi kunye neeCommas
Indlela yokusebenzisa isiNgesi Ukuphulaphula izakhono zokuqonda
Imfazwe: uKumkani uRichard I i-Lionheart yaseNgilani
I-Astronomy 101: Ukufunda ilanga
I-American Author Author Maps: Iimpawu Zolwazi kwi-Classroom Classroom
Iindlela ezi-7 ootitshala bafumana umbuzo ongalunganga